Most 5-htp aizivikanwawo oxitriptan (INN) iri zvikaramba kubva mbeu imwe Woody kukwira shrub chizvarwa kuWest Africa, anonzi Griffonia simplicifolia chirimwa.
5-htp kana "hydroxy L-tryptophan" (5-Hydroxytryptophan) ari muropa-yokuvamba amino asidhi uye ndiye aizotangira uye metabolic zvenguva dziri biosynthesis pamusoro neurotransmitters kweserotonin Melatonin kubva tryptophan. 5-htp ari kuchinjwa kuti neurotransmitter kweserotonin (5-HT), achibatsirwa vhitamini B6.This rinowanikwa zvose huta zvinyama uye chiropa. 5-htp chinoyambuka ropa-uropi chipingamupinyi (apo 5-HT haadaro). Naizvozvo Supplementation pamwe 5-htp kunowedzera kugadzirwa kweserotonin.
Zvikuru kushandiswa kubatsira kufutisa (kudya zvinenge zvataurwa), PMS, kutemwa nemusoro, kuora mwoyo, kufunganya, kushaya hope uye muropa maitiro. 5 htp kunowedzera kugadzirwa kweserotonin. Kweserotonin mumatunhu ari tsinga zvinokosha zvakawanda saka zvatinoita zuva nezuva. Kweserotonin ndiye nemanzwiro zvakanaka hwakanaka, kugutsikana uye kuti hapana chakaipa kurara avaiita. Kufutisa, PMS, kutemwa nemusoro, kuora mwoyo, kufunganya, kushaya hope uye muropa maitiro vose vakasonganira yakaderera siyana kweserotonin. Kweserotonin inoita basa rinokosha hasha, hukasha, muviri tembiricha, manzwiro, hope, nezvepabonde kwevanhu, kudya, uye muviri, uyewo mutange kurutsa.
Zvinofungidzirwa kuti chipatapata ano mararamiro mupfungwa uye madyiro akaipa lowers kweserotonin mumatunhu ari mumuviri. Zvinozivikanwa kuti kushatirwa, hukasha, kusashivirira, kufunganya vaitozonyepa muvanhu kuti seyi chikonzero uye muviri kusunungura kweserotonin. kweserotonin uku kunofanira kukasawedzerwa nomuviri kubva chikafu iwe udye. Asi kweserotonin haina kuwanikwa yakawanda mune zvokudya dzakawanda saka muviri anofanira anoita ihwo zvokudya ane L-tryptophan, akadai chocolate, oats, mabhanana, yaoma misi, mukaka, yogati, koteji chizi, nyama, hove, kuTurkey , huku, sesame, pizi, uye nzungu. Naizvozvo vanhu vazhinji vanopanga zvokudya akarongwa (kwemafuta uye makabhohaidhiretsi), kunyanya kana kunetseka, kuchikonzera kufuta, kuora mwoyo, kutemwa nomusoro, uye tsandanyama pari.
Atkins Diet - kuderedza nehavi
Ongororo Clinical dzakaratidza kuti supplementing ne 5-htp pave nemigumisiro yakanaka uremu, kufunganya, uye kuora mwoyo. It kunonatsiridza hope avaiita uye anoderedza carbohydrate kuchiva vaya vari pasi carbohydrate zvokudya (akadai The Atkins Diet). Munhu anokushandisira uremu chirongwa akafanana Atkins Diet aigona kuona zvinoderedza kweserotonin yomuropa nokuti kuti makabhohaidhiretsi inotokonya kweserotonin kurimwa mumuviri. Kweserotonin kusunungurwa ari kukonzerwa mutoro carbohydrate (shuga etc.) uye zvinonzi vakafunga kuti chikonzero isu kazhinji kuda makabhohaidhiretsi pasi kushushikana sezvo tichida kukurudzira ichi kweserotonin kusunungurwa. Kana uropi unobereka kweserotonin, Makakatanwa ari kwakaderera. Asiwo kana uropi unobereka dopamine kana norepinephrine (noradrenaline), Tinowanzofunga uye chiito nokukurumidza uye kazhinji zvikuru vakachangamuka. Naizvozvo kudya makabhohaidhiretsi sokuti inoita kuti zvinhu zvidzikame, apo mapurotini kuwedzera kurinda.
Kutora 5-htp zvokuwedzera chingamise nehavi ichi nokuda kwemafuta uye makabhohaidhiretsi, uyewo kupa muviri pamwe zvinoreva kudzora avo mamwe mabasa ose akanyorwa pamusoro, akadai hasha, kudya uye hope.
Kuvabatsira Depression uye Kunetseka
Tsvakurudzo chakaitwa kunyika 5-htp uye zvinoratidza ine zvinogona kubatsira nokuora mwoyo uye zvimwe kufunganya, kutya chirwere, hope zvirwere uye kufutisa. 5-htp sokuti zvakafanana migumisiro sezvo SSRI (Selective kweserotonin Re-uptake FIs) antidepressants.
Mishonga inonyorwa nachiremba kuti kusimudza kweserotonin yomuropa vari nachiremba zvose matambudziko aya, asi vanhu vakawanda vanodavira 5-htp wechisikigo nzira kuita chinhu chimwe.
Anatsiridze hope, Zvinokurudzirwa zvikuru kutora 5-htp 30 mins ndisati ndarara sezvo kunze kubereka kweserotonin, 5-htp unoberekawo Melatonin, inova kukotsirisa kemikari. Zvatinosiita chipimo chemushonga iri kana munhu 50mg kana 100mg piritsi. Migumisiro kutora 5-htp anogona kubatwa mukati 10 kusvika 30 mins.
Edza kutenga 5-htp iyo rinewo vhitamini B6, sezvo Vit B6 runodikanwa 5-htp kutendeuka kupinda kweserotonin.
Zvizhinji yepamusoro mishonga sezviri inodiwa uremu uye kuderedza kutemwa nemusoro. Dosages kusvikira kumativi 900mg zuva sokuti azivikanwe yakashuma.
5-htp inowanzopiwa akashivirira nani zvikuru pane chinyakare antidepressants. Zvakawandisa 5-htp anofungidzirwa kuti rinoita uye yabudiswa, kunyanya kana kubatwa Vitamin B6.
Wadii kuedza vamwe nhasi uye ona kana iwewo unogona kuderedza pakuchiva kwenyu, mupfungwa uye hasha yomuropa, uyewo kuwana kurara zvakanaka usiku!